Izinyathelo ezi-3 Zesu Eliqinile Ledijithali Labashicileli Abashayela Ukuzibandakanya Nemali Engenayo | Martech Zone
Izinyathelo ezi-3 eziya kuSu Eliqinile Ledijithali Labashicileli leDrayivu Engagement & Revenue
NgoLwesithathu, Agasti 26, 2020 NgoLwesithathu, Agasti 26, 2020 UJeff Kupietzky
Njengoba abathengi sebenyukele kakhulu ekusetshenzisweni kwezindaba eziku-inthanethi futhi benokuningi ongakhetha kukho okutholakalayo, abashicileli bokuphrinta babone ukwehla kwemali engenayo. Futhi kwabaningi, bekunzima ukujwayela isu ledijithali elisebenza empeleni. Ama-paywalls abe yinkinga enkulu, ahambisa ababhalisile kude nobuningi bokuqukethwe kwamahhala. Izikhangiso zokubonisa nokuqukethwe okuxhasiwe kusizile, kepha izinhlelo ezithengiswa ngqo zisebenza kanzima futhi ziyabiza, okwenza zingatholakali ngokuphelele izinkulungwane zabashicileli abancane, abancane.
Ukusebenzisa inethiwekhi yesikhangiso ukugcwalisa okuzenzakalelayo kube yimpumelelo ngandlela thile, kepha lokhu kuncike kakhulu kumakhukhi ukuze izethameli zikhombe, kwakha izivimbamgwaqo ezine ezinkulu. Okokuqala, amakhukhi awakaze anembe kakhulu. Aqondene nedivayisi ethile, ngakho-ke awakwazi ukuhlukanisa phakathi kwabasebenzisi abaningi kudivayisi eyabiwe (ithebhulethi esetshenziswa amalungu amaningi omndeni, ngokwesibonelo), okusho ukuthi idatha abayiqoqayo ayibonakali futhi ayinembile. Amakhukhi nawo awakwazi ukulandela abasebenzisi kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwenye. Uma umsebenzisi eshintsha kusuka kwi-laptop eya kuselula, umzila wamakhukhi ulahlekile.
Okwesibili, amakhukhi akakhethi ukungena. Kuze kube muva nje, amakhukhi alandele abasebenzisi ngokuphelele ngaphandle kwemvume yabo, futhi kaningi ngaphandle kolwazi lwabo, ephakamisa ukukhathazeka kwangasese. Okwesithathu, izivimbeli zezikhangiso nokuphequlula okuyimfihlo kubeke i-kibosh ekulandeleleni okususelwa kumakhukhi njengemibiko yabezindaba yokuthi izinkampani zisebenzisa kanjani - noma zisebenzisa kabi, njengoba kungenzeka - idatha yezithameli iqede ukwethembana, okwenza abasebenzisi baqhubeke nokusola nokungazizwa kahle. Futhi ekugcineni, ukuvinjelwa kwakamuva kwamakhukhi wenkampani yangaphandle ngazo zonke iziphequluli ezinkulu kunamakhukhi wenethiwekhi yesikhangiso amahle kakhulu futhi ayisebenzi.
Khonamanjalo, abashicileli baphinde bazabalaza ukusizakala ngamanethiwekhi okuxhumana nabantu ukuze baqoqe imali engenayo — noma mhlawumbe ngokunembe kakhudlwana, ukuxhumana nabantu kusizakale ngabashicileli. Akukhona nje ukuthi lezi zingxenyekazi zintshontshe isabelo esikhulu semali esetshenzisiwe, kodwa futhi zicindezele okuqukethwe ngabashicileli kokuphakelwa kwezindaba, kuphuca abamemezeli ithuba lokungena phambi kwezilaleli zabo.
Futhi ukushaywa kokugcina: ithrafikhi yomphakathi yi-100% yokudluliswa kwethrafikhi, okusho ukuthi uma umsebenzisi echofoza esizeni sommemezeli, umshicileli akanakho ukufinyelela kwedatha yomsebenzisi. Ngoba abakwazi ukubazi labo bavakashi abadluliswayo, akunakwenzeka ukuthi bafunde izintshisekelo zabo futhi basebenzise lolo lwazi ukwenza okuningi kwalokho abakuthandayo ukubenza bahlanganyele futhi babuye.
Ngakho-ke, yini ummemezeli okufanele ayenze? Ukuze bazijwayeze leli qiniso elisha, abashicileli kufanele bathathe ukulawula okuningi kobudlelwano babo nezithameli futhi bakhe ukuxhumana okuqinile komuntu ngamunye kunokuthembela kubantu besithathu. Nakhu ukuthi ungaqala kanjani ngamasu amathathu wedijithali abeka abashicileli phambili futhi aqhube imali engenayo entsha.
Isinyathelo 1: Yiba Nezithameli Zakho
Yiba nezithameli zakho. Esikhundleni sokuthembela kubantu besithathu njengamakhukhi neziteshi zenhlalo, esikhundleni salokho, gxila ekwakheni isisekelo sakho sababhalisile ngokubhalisela ukubhala izincwadi zakho ze-imeyili. Ngoba abantu abavamile ukwaba ikheli le-imeyili, futhi kuyefana kuwo wonke amadivayisi, i-imeyili iyisihlonzi esihlukile esinembe kakhulu nesisebenza kangcono kunamakhukhi. Futhi ngokungafani neziteshi zenhlalo, ungaxhumana nabasebenzisi ngqo nge-imeyili, usike umuntu ophakathi nendawo.
Ngalesi sivumelwano esiqondile, ungaqala ukwakha isithombe esiphelele salokho abasebenzisi abakufunayo ngokulandela indlela abaziphethe ngayo nangokufunda izinto abazithandayo ngisho nakumadivayisi neziteshi. Futhi, ngoba i-imeyili ingene ngokuphelele, abasebenzisi banikeze ngokuzenzakalela imvume yokuthi ufunde ukuziphatha kwabo, ngakho-ke kukhona izinga eliphakeme kakhulu lokuthembana.
Isinyathelo 2: Sebenzisa iziteshi ezingumnikazi ngaphezu kweziteshi ezivela eceleni
Sebenzisa iziteshi eziqondile njenge-imeyili bese ucindezela izaziso ukubandakanya ababhalisile ngangokunokwenzeka esikhundleni senhlalo nokusesha. Futhi, ngokuxhumana nomphakathi nokusesha, ubeka umuntu wesithathu ekulawuleni ubudlelwane bakho nezithameli. Labagcini-masango abagcini nje ngokulawula imali engenayo yezikhangiso kepha futhi nedatha yomsebenzisi, okwenza kungabi lula kuwe ukuthi ufunde ngokuthandwa kwabo nalokho abakuthandayo. Ukuhambisa ukugxila kwakho eziteshini ozilawulayo kusho ukuthi nawe ulawula idatha yomsebenzisi.
Isinyathelo 3: Thumela okuqukethwe okuhlobene, okwenziwe ngokwezifiso
Manje njengoba wazi okuningi ngokufunwa yilowo nalowo obhalisile, ungasebenzisa lezo ziteshi ukuthumela okuqukethwe okwenzelwe umuntu ngamunye. Esikhundleni se-batch-and-blast, i-size-size-ifanela-yonke i-imeyili noma umyalezo oya kubo bonke ababhalisile, ukuthumela okuqukethwe okwenziwe ngezifiso kufakazelwe ukuthi kusebenza kakhulu kakhulu kubabhalisile ababandakanyekayo nasekuhlakuleleni ubudlelwane obuhlala njalo.
Ukuze Imidlalo yeGoGy, ipulatifomu yokudlala eku-inthanethi, ukuthumela izaziso zohlelo lokusebenza ngokwezifiso kube yingxenye enkulu yecebo labo lokuzibandakanya eliphumelelayo.
Ikhono lokuthumela umyalezo ofanele kanye nesaziso esifanelekile kumsebenzisi ngamunye kubaluleke kakhulu. Bafuna okuthile okwenziwe ngezifiso, futhi ukuthandwa komdlalo nakho kubaluleke kakhulu. Bafuna ukudlala lokho wonke umuntu akudlalayo futhi lokho kuphela kusizile ukushayela amanani wokuchofoza-thru phezulu kakhulu.
UTal Hen, Umnikazi weGoGy
Leli qhinga lokuqukethwe elenziwe ngokwezifiso selivele lisetshenziswe ngabashicileli abanjengoGoGy, Assembly, Salem Web Network, Dysplay neFarmers 'Almanac uku:
Diliva izaziso ezingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezimbili ngenyanga
Shayela a 25% khuphula ithrafikhi
Shayela a Ukunyuka okungu-40% kokubukwa kwamakhasi
Shayela a Ukunyuka kwemali ye-35%.
Ngenkathi isu lelo selikhombisile ukuthi liyasebenza, ungahle uzibuze:
Ngubani onesikhathi nezinsizakusebenza zokuthumela ama-imeyili enziwe uqobo futhi acindezele izaziso kumakhulu ezinkulungwane noma ezigidini zababhalisile?
Yilapho i-automation ingena khona I-Jeeng nge-PowerInbox ipulatifomu inikezela ngesixazululo esilula, esizenzakalelayo sokuthumela izexwayiso ezi-personalized ne-imeyili kubabhalisile ngomzamo wokuzenzela. Eyakhelwe ngqo abashicileli, ubuchwepheshe bokufunda bomshini bukaJeeng bafunda okuthandwa ngumsebenzisi nokuziphatha kwe-inthanethi ukunikezela ngezaziso ezifanele kakhulu, ezenziwe ngezifiso nezihlosiwe ezibandakanya ukubandakanyeka komsebenzisi.
Ngaphezu kokunikeza isisombululo esizenzakalelayo ngokuphelele, kufaka phakathi amandla wokuhlela izaziso zokwenza ngcono ukuzibandakanya, iJeeng ivumela ngisho nabashicileli ukuthi benze imali ngokuthumela kwabo i-push ne-imeyili ukwengeza ukusakazwa kwemali okwengeziwe. Futhi, ngemodeli yokwabelana ngemali kaJeeng, abashicileli bangangeza lesi sixazululo esinamandla sokuzibandakanya ngezindleko zero phambili.
Ngokwakha isu lokusabalalisa okuqukethwe elenzelwe iziteshi ezivumela abashicileli ukuba babe nobudlelwano bezethameli, abashicileli bangashayela ithrafikhi eningi — kanye nomgwaqo osezingeni eliphakeme kakhulu — babuyele emakhasini abo, ngakho-ke bashayele imali engenayo ephezulu. Ukufunda okuthandwa yizithameli zakho kubaluleke kakhulu kule nqubo futhi awukwazi ukukwenza lokho lapho uthembele kumuntu wesithathu, iziteshi zokudlulisela. Ukulawula lobo budlelwano neziteshi ezingabanikazi kuyindlela engcono kakhulu yokwakha isu ledijithali elikhulisa izethameli zakho nemali engenayo.
Ukuze ufunde ukuthi iJeeng ezenzakalelayo ngokuphelele ngePowerInbox ingasiza kanjani:
Bhalisela i-Demo Namuhla
Tags: Abakhangisi bezikhangisoukusatshalaliswa kokuqukethweamakhukhii-jeengukufunda imishiniizaziso zeselulaukungena ngemvumeophetheimidiya ephethweamandlasusa izazisoiziteshi zokudlulisela
UJeff usebenza njenge-CEO ye-PowerInbox, inkampani yezobuchwepheshe entsha esiza izinkampani ukwenza imali ngezincwadi zabo ze-imeyili ngokuqukethwe okunamandla. Ngaphambi kokujoyina i-PowerInbox, uJeff wasebenza njengoMongameli kanye ne-CEO kuOversee.net, ephethe ukusebenza komhlaba wonke nokwakha iphothifoliyo ephethwe futhi eqhutshwa ngamagama wesizinda e-Oversee yaba kwelinye lamakhulu kunawo wonke emhlabeni, esungula inkampani njengomholi we-Internet real estate. Ngaphansi kobuholi bakhe, inkampani yahlukahluka yaba yisizukulwane esiholayo, yakha amabhizinisi amaningana okukhula okuphezulu kanye ne-margin ephezulu. Ngaphambi kwalokho, uKupietzky wasebenza ezikhundleni zobuholi ngeX1 Technologies, Digital Insight (Intuit), iSiebel Systems (Oracle), neLoudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). UJeff waqala umsebenzi wakhe wokuba ngumxhumanisi weMcKinsey & Co, esungula amasu ebhizinisi wesoftware, umshuwalense namakhasimende asebhange. Isikhulumi esivamile ezingqungqutheleni zeDigital Media, ubuye wabonakala naku-CNN, CNBC, nakumagazini amaningi wezindaba nawamabhizinisi.
Izibalo ze-CRM ze-2020: Ukusetshenziswa, Izinzuzo Nezinselelo Zamapulatifomu Wokuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende
Funda ukuthi Ungayandisa Kanjani Imali Ngokusebenzisa Amandla Awesome Ebhokisini Lakho Lokucinga Elincane